Alle Ka Cabsiga |
MACALLIN JAAMACADDII WAAN DHAMMEEYEY – Gabadhii shaxda yaabka leh u degtay macallinkeedii
Muslimiintu Waxay Haystaan Diinta Islaamka ||Tukesomalism.com
Arrimaha Qoyska & Horumarinta BulshadaDiinta Islaamka
Alle Ka Cabsiga
Cabdiqani Qorane Cismaan — September 3, 2019
Alle ka cabso meel walbo oo aad dunida ka joogto.
Alle ka cabsigu waa darajo aad u sareysa oo aanu gaadhi karin qofka ku dheehan xumaanta kana fog wanaaga, sidaa daraadeed ayeynu soo sheegney iney tahay ( Allaah oo wuxuu ku faray la fuliyo, macaasidiisana laga dheeraado, xuduudiisana lagu eekaado).
Inuu qofku qalbigiisa dareensiiyo inuu Allaah daalacanayo kana xishooda Alle, xishood xaqiiqo ah. Inuu ogaado ama is dareensiiyo dhibaatada ay leedahay macaasidu iyo danbigu.Inuu barto iskuna dayo siduu qofku hawadiisa uga xoog badan lahaa, naftiisana uga guulaysan lahaa. Iyo inaad ogaatid meelaha shaydaanku kaa soo galayo, sidoo kalana ka dig toonaatid tashwiishkiisa.
Waxaynu se u baahan nahay ineynu sharax ka bixinno dariiqa lagu gaadhi karo darajadaasi oo runtii u baahan dadaal iyo u diyaar garow buuxa. Hadduu qofku ogaado sharafta taqwada iyo heerka ay gaadhsiisan tahay waxa la gudboon inuu is weydiiyo; sidaan ku gaadhayaa darajada taqwada?
Arrinkaasi waxa uga jawaabaya Imaamka tarbiyadda Quluubta ee Al-Qazali oo yidhi:
”Waxa uu ku jiraa wanaaga Naftu inaad isu taagto una diiddo macsiyo kasta, kana ilaaliso waxaan faa’iido ugu jirin haddaad sidaa sameyso Allaah waad ka baqatey, Ishaada, dhegtaada, carabkaaga, qalbigaaga, calooshaada, xubintaada taranka, iyo xubnahaaga kaleba waad dhawrtey waxaanad ku xakameysey taqwada Alle (swt).”
Sidaa awgeed baabkanu waa mid dheer sharaxiisu, waxaana odhaahdeedu lagama maarmaan tahay Ninkii doonaya inuu Allaah ka cabsado ha dhawro xubnahan shanta ah oo ah seeskiisa, waana (Isha, dhegaha, carabka, qalbiga iyo caloosha).
Haddii la ilaaliyo xubnahan waxa xaqiiqo ah in intooda kalena toosayaan, waxaanu gudanayaa taqwada iyo Allaah ka cabsiga dhammaantii). Manhajka caabudayaasha ee Sheekh Qasaali/ 76-77.
Hadalkan Sheekha Qasaali (R.C) waxa ka imaneysa su’aal kale oo odhaneysa; sidaan xubnahaygan shanta ah uga dhawraa macsiyada “Danbiga”uguna hogaamiyaa daacada Allaah?.
Mawduuca dhuuxiisu waa halkan oo ah xubnahan qofka siduu u hoggaamin lahaa oo haddey haggaagaan ah hagaagga qofka iyo liibaantiisa ifka iyo aakhiraba, kuwaas oo ka kooban shantaasi xubnood, waana kuwaa xukuma xubnaha qofka intooda kale, waxaynu si kooban ugaga jawaabi doonnaa shan qodob oo Ruuxii raacaa uu kaga magan galayo xubnahan sharkooda, khayrkoodana helayo, cibaadadoodana gudanayo:
Inuu qofku illaahay jeclaado. Inuu qofku qalbigiisa dareensiiyo inuu Allaah daalacanayo kana xishooda Alle, xishood xaqiiqo ah. Inuu ogaado ama is dareensiiyo dhibaatada ay leedahay macaasidu iyo danbigu.Inuu barto iskuna dayo siduu qofku hawadiisa uga xoog badan lahaa, naftiisana uga guulaysan lahaa. Iyo inaad ogaatid meelaha shaydaanku kaa soo galayo, sidoo kalana ka dig toonaatid tashwiishkiisa.
Taasi waa qodobada lagu ilaalin karo xubnahaasi shanta ah oo mawduuca aynu ku soo qaadan doonno mid ka mida.
Tags: Alle Ka Cabsiga
Next post Jacaylka & Kalgacaylka Illaahay
Previous post Sheekadii Guusha Ee Ibrahim Al Fiqhi